Nepalistudio » कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्डमा गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ ? हाेसियार हुनुहाेस् कारबाहीमा पर्नुहोला कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्डमा गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ ? हाेसियार हुनुहाेस् कारबाहीमा पर्नुहोला – Nepalistudio
कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्डमा गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ ? हाेसियार हुनुहाेस् कारबाहीमा पर्नुहोला
बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न काठमाडौं उपत्यकाका चौडा सडकमा सवारीसाधनको गति निर्धारण गरिएको छ।
ट्राफिक महाशाखाका अनुसार ‘लेजर स्पिड गन’ विशेष खालको क्यामेराजडित उपकरण हो । यो दूरबिन आकारको हुन्छ, यसलाई ट्राफिक प्रहरीले सजिलैसँग हातमा लिएर सञ्चालन गर्न सक्छन् । यसले सवारीसाधनको तस्बिरका साथै उसको गति नाप्न सक्छ । सवारीसाधनको दूरी पनि उपकरणले देखाउँछ ।